Day Tour to Petra from Aqaba 2020
See Petra highlights on a day trip from Aqaba
Visit the Siq, Treasury, Royal Tombs, and theater
Enjoy a short horse ride (if you would like)
If you require pick up from a cruise ship, please contact us
What is the policy on face masks and attendee health during Day Tour to Petra from Aqaba?
See all safety measures taken by Day Tour to Petra from Aqaba.
What is the policy on sanitization during Day Tour to Petra from Aqaba?
What is the social distancing policy during Day Tour to Petra from Aqaba?
What measures are being taken to ensure staff health & safety during Day Tour to Petra from Aqaba?
What is the maximum group size during Day Tour to Petra from Aqaba?
Petra spectacular, a bucket list essential, messy start with 30 min wait, guide OK but needs to be more lively to create an atmosphere and failed tell us of visitor centre and museum which were more informative than him, coach poor and very well worn, lunch poor and not worth the bother, just some fresh fruit and stodgy bread
Product code: 26254P39